Dowladda oo madaxweyne Qoor -qoor dhaliil ujeedisay – Radio Daljir
Dowladda oo madaxweyne Qoor -qoor dhaliil ujeedisay
Juunyo 17, 2021 10:07 b 0
Afhayeenka Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow ayaa ku dhaliilay Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye in uu lasoo daahay Magacaabista xubnihii guddiga doorashooyinka ee loo gudbiyay.
Waxaa uu sidoo kale uu ka dalbaday in dhammaan sida maamulada kale ay Galmudug u soo gudbiso xubnaha guddiga doorashooyinka.
Afhayeenka Ra’iisul Wasaaraha Maxamed Ibraahim Macalimuu ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaaraha uu ka codsanayo Madaxweyne Qoorqoor inuu so dhaqse ah u soo gudbiyo liiska Xubnaha Galmudug.
“Dowlad-goboleedyada inta badan wey u soo gidbiyeen Ra’iisul Wasaaraha liiska wax ka baddelka Guddiyada Doorashooyinka ee dib loo eegay. Waxaa weli laga war dhowrayaa Dowlad Goboleedka Galmudug oo ah Dowlad Goboleedka kaliya ee aan weli soo dirin. Maadaama waqtigu uu soconayo, shacabka Soomaaliyeedna ay doonayaan in la dardargaliyo howlaha hirgalinta doorashooyinka ayaa Ra’iisul Wasaare Rooble iyo guddiga heer Wasiir ee uu magacaabay waxa ay ka codsanayaan Madaxweyne Ahmed Cabdi Kaariye inuu si dhaqso ah u soo gudbiyo liiska xubnaha Galmudug ee laga sugayo muddada todobaadka ah” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay xukuumadda Soomaaliya.
Keenna dhiirran ee hal abuurka leh aan garab istaagno, Waxaa qortay Nasro Sabbag